Francisco Tejedo Torrent, onye mmeri nke III Carmen Martín Gaite Nrite. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ihe nrite 2018 Carmen Martín Gaite.
Francisco Tejedo Torrent na-eme na nke atọ mbipụta nke Onyinye Carmen Martín Gaite na a akwụkwọ akụkọ ụmụ nwanyị.
Onye edemede 73 afọ ọzọ na ọrụ ya ndụ akụkọ ifo nke María de Zayas y Sotomayor, Onye edemede Spanish sitere na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri na asaa, ọsụ ụzọ nke nwanyị, onye a na-amaghị ndụ ya ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Un jikọtara ọnụ juri site ndị dere ya Marmụ nwoke Marías, Pilar Fraile, Ana Lena Rivera na onye otu onye isi oche nke Editorial Traspiés, chịrị maka ọdịmma nke Francisco Tejedo Torrent.
María de Zayas na Sotomayor.
Ihe mejupụtara ọrụ María de Zayas a maara nke ọma bụ Nlereanya na ịhụnanya akwụkwọ akụkọ (1637), Akwụkwọ ọhụrụ na saraos (1647), Akụkụ nke abụọ nke Sarao na ntụrụndụ eziokwu (1649) na Nrara nye na ọbụbụenyi, nke ụfọdụ n'ime iberibe akwụkwọ ụfọdụ na-emegharịghachi na ọrụ mmeri.
A toro akwụkwọ María de Zayas site na ya dịkọrọ ndụ, Lope de Vega, na akwụkwọ ya bụ Laurel nke Apollo ma were dị ka ntụaka nwanyị na narị afọ nke XNUMX site Emilia Pardo Bazan, n'etiti ndị ọzọ dere akwụkwọ akụkọ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ.
Onyinye Carmen Martín Gaite.
A kpachapụrụ anya maka onyinye a, emere ka mmụọ Carmen Martín Gaite dị ndụ, n'obodo Madrid Ndị Boalo y ọ ghọrọ onye isi na 22 nke ọnwa nke July, na-adaba na ncheta afọ nke onye edemede nke ejiri asọpụrụ asọmpi a.
Ọmarịcha obodo nke Madrid ugwu, onye City Council haziri edemede akwụkwọ, na-akwado ndị Ezinụlọ ezinụlọ Carmen Martin Gaite, taa ụlọ nke onye nnọchi anya ezinụlọ ikpeazụ, nwanne ya nwanyị, Ana Martin Gaite, 93, na bụ isi ụlọ ọrụ nke ntọala nke na-elekọta ọdịnala ọdịnala nke onye edemede a ma ama.
Iguzosi ike n'ezi ihe nke Carmen Martín Gaite Nrite na-ekwe nkwa na ngosipụta nke ndị edemede niile n'okpuru aha nzuzo ma ọ bụ aha ederede, na-ekwe nkwa na usoro a anaghị ekpughe ezigbo aha ndị dere ruo mgbe emechara ya.
Mbipụta mbụ na nke abụọ nke onyinye a bụ nye Miguel Ángel Cáliz, ya na akwụkwọ akụkọ banyere obi ụtọ akpọrọ. Obi uto na Blister, na maka ndị ikom Marías, na Pukata, Azụ na Azụ, akụkọ siri ike ma dị nro banyere ndụ ndị si mba ọzọ kwabata na Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Francisco Tejedo Torrent, onye mmeri nke III Carmen Martín Gaite Nrite.
Stephanie Ruefa kwuru dijo
Isiokwu ahụ kpachaara anya hapụ Miguel Ángel Cáliz bụ onye guzobere na onye editọ nke ụlọ ọrụ na-akpọkọta, ụlọ obibi akwụkwọ Traspiés. Ikwu banyere iguzosi ike n'ezi ihe.
Zaghachi Estefanía Ruefa
Ndewo Estefanía: Daalụ maka okwu gị. Ọ na-eweta ọgaranya mgbe niile ịnweta data ndị ọzọ. Achọpụtara m banyere onyinye ahụ na mbipụta nke abụọ mgbe onye edemede meriri kpọrọ m ka m soro ya gaa ngosi nke akwụkwọ akụkọ ya. Ugbu a, mgbe ha kpọrọ m ka m bụrụ ndị juri, ndị obodo Boalo City Council nọ na-agwa m akụkọ banyere onyinye ahụ, ihe kpatara e ji malite ya, gịnị kpatara na Boalo, akụkọ ihe mere eme Carmen Martín Gaite ntọala, nke ezinụlọ wdg ... na, Site na ihe a gwara m, na mbipụta mbụ nke onyinye ahụ, ụlọ obibi akwụkwọ Traspiés abụghị ụlọ obibi akwụkwọ nke bipụtara akwụkwọ mmeri ahụ. Ọ bụ Ediciones Turpial. Ha wee malite imekorita ya na Traspiés n'ihi na nwoke a bu onye mmeri nke onyinye a. Amaghị m ma ọ bụrụ na ederede a nwere ihe jikọrọ ya na Ediciones Traspiés.